Vanodyidzana - Sorrento Therapeutics
ACEA Therapeutics, iri muSan Diego, California inzvimbo inotsigirwa neSorrento. ACEA Therapeutics yakazvipira kugadzira uye kuendesa mishonga yekuvandudza hupenyu hwevarwere vane zvirwere zvinouraya.
Yedu lead compound, Abivertinib, diki molecule kinase inhibitor, parizvino iri kuongororwa neChina Chikafu neDrug Administration (CFDA) yekurapa varwere vane isiri-diki cell cancer yemapapu (NSCLC) ine EGFR T790M mutation. Zviri zvakare mumiyedzo yekiriniki yekurapa varwere vari muchipatara neCovid-19 muBrazil neUS inotungamirwa na Sorrento Therapeutics. Yechipiri diki molecule kinase inhibitor yeACEA, AC0058, yapinda muChikamu 1B budiriro muUS yekurapa systemic lupus erythematosus (SLE).
Padivi nesangano rakasimba reR&D, ACEA yakamisa kugadzira zvinodhaka uye kugona kwekutengesa muChina kutsigira kukura kwedu kwenguva refu. Izvi zvivakwa zvinotipa hukuru hwekutonga pamusoro pekutengesa kwedu cheni kuti tive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinounzwa kuvarwere nenguva.
SCILEX HOLDING COMPANY ("Scilex") , iyo yakawanda-inotsigirwa neSorrento, yakatsaurirwa mukusimudzira nekutengeserana kwemishonga yekugadzirisa marwadzo. Iyo kambani inotungamira chigadzirwa ZTlido® (lidocaine topical system 1.8%), inonzi branded prescription lidocaine topical product yakagamuchirwa neU.S. Food and Drug Administration yekunyaradza marwadzo ane chokuita nePost-Herpetic Neuralgia (PHN), inova nzira ye post-shingles nerve pain.
Scilex's SP-102 (10 mg dexamethasone sodium phosphate gel), kana SEMDEXA™, yekurapa Lumbar Radicular Pain iri mukugadzirisa kupedza Phase III kliniki yekuedza. Iyo kambani inotarisira kuti SP-102 ive yekutanga FDA yakabvumidzwa isiri-opioid epidural jekiseni kurapa lumbosacral radicular pain, kana sciatica, ine mukana wekutsiva gumi kusvika 10 miriyoni off-label epidural steroid jekiseni rinoitwa gore rega rega muUS.
Bioserv, iri muSan Diego, California inzvimbo inotsigirwa neSorrento. Yakatangwa muna 1988, sangano iri inotungamira cGMP kondirakiti yekugadzira sevhisi inopa inopfuura 35,000 masikweya tsoka dzezvivakwa zvine hunyanzvi hwekuita hwakanangana muaseptic uye isiri-aseptic bulk formulation; kusefa; filling; stopping; lyophilization services; labeling; kugadzirwa kwezvinhu zvakapera; kitting uye kurongedza; pamwe nekudzora tembiricha yekuchengetedza uye kugovera masevhisi kutsigira Pre-Clinical, Phase I uye II Clinical Trial zvinodhaka zvigadzirwa, zvekurapa mudziyo reagents, zvekurapa diagnostic reagents uye kits, uye hupenyu hwesainzi reagents.
Muna 2008, Concortis Biosystems yakavambwa iine chinangwa chekushandira zvirinani nharaunda yesainzi neyemishonga nemhando yepamusoro antibody drug conjugate (ADC) reagents nemasevhisi. Muna 2013, Sorrento akawana Concortis, achigadzira kambani yepamusoro yeADC. Iko kusanganiswa kweG-MAB ™ (yakazara vanhu antibody raibhurari) ine Concortis proprietary toxins, linkers, uye conjugation nzira ine mukana wekugadzira indasitiri inotungamira, 3rd chizvarwa ADCs.
Concortis parizvino iri kuongorora pamusoro pemakumi maviri akasiyana ADC sarudzo (pre-kiriniki) ine maapplication mune oncology uye nekumwe. Musi wa20 Gumiguru, 19, Sorrento yakazivisa kusikwa kweLevena Biopharma sesangano rakazvimirira kuti ripe musika huwandu hwakawanda hwesevhisi dzeADC kubva pakatanga chirongwa cheADC kuburikidza neCGMP kugadzira maADC kusvika pachikamu I/II zvidzidzo zvekiriniki. Kuti uwane ruzivo rwakadzama, ndapota shanya www.levenabiopharma.com
Nhoroondo ye SmartPharm Therapeutics, Inc
SmartPharm Therapeutics, Inc. (“SmartPharm”), rimwe divi rekambani. Sorrento Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SRNE), idanho rekusimudzira biopharmaceutical kambani yakatarisana nechizvarwa chinotevera, isiri-hutachiona gene kurapwa kwezvirwere zvakakomba kana zvisingawanzo nechiratidzo chekugadzira "biologics kubva mukati." SmartPharm parizvino iri kugadzira chinyorwa, DNA-encoded monoclonal antibody kudzivirira kutapukirwa neSARS-CoV-2, hutachiona hunokonzera COVID-19 pasi pechibvumirano neDefence Advanced Research Projects Agency yeUS Dhipatimendi reDziviriro. SmartPharm yakatanga kushanda muna 2018 uye inotungamirwa muCambridge, MA, USA.
Areka Mhuka Hutano
Areka Mhuka Hutano ibasa rakazara reSorrento. Ark yakaumbwa muna 2014 kuti iunze kumusika wemhuka zvigadziriso zvigadziriso zvakaburitswa kubva kuSorrento yekutsvagisa kwevanhu nekusimudzira zviitiko. Iri kurongeka kuti rive sangano rakazvimiririra rakazara uye rinozvimiririra kana rasvika padanho rekutengesa (zvigadzirwa zvakagadzirira kugamuchira FDA mvumo).
Ark's lead development programme (ARK-001) idosi rimwechete resiniferatoxin (RTX) inobaiwa jekiseni. ARK-001 yakagamuchira FDA CVM (Center for Veterinary Medicine) MUMS (kushandiswa kudiki / mhando diki) zita rekudzora kurwadziwa kwegomarara remapfupa mumbwa. Mamwe mapurojekiti anosanganisira zvimwe zvinongedzo zveRTX munzvimbo dzakaita senge kusingaperi articular marwadzo mune shamwari mhuka, neuropathic kurwadziwa mumabhiza, uye idiopathic cystitis mumakati, pamwe nekuongorora mikana yebudiriro munzvimbo yezvirwere zvinotapukira kana kurapwa gomarara.